Fitantanam-pitondrana · Jona, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Jona, 2018
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Jona, 2018
India : Hadisoana, Media Ary Mumbai
Amerika Avaratra 30 Jona 2018
Na izany aza, mahamarika singa maha-velom-panantenana ihany izy : 7.6% ny harinkarena faobe. Nidina 8.84% ny sondrobidim-piainana, izay, hoy izy manampy, "farafaharatsiny mba zavatra kely afaka ireharehàna"
Oman: Fanasivanana tsy nahy ny aterineto
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Jona 2018
Avy any Oman, manome fanavaozam-baovao momba ny famaritany ny atao hoe 'fanasivanana ny aterineto tsy nahy' ato amin'ity lahatsoratra ity i Riyadh Al Balushi.
Ejypta : Fisamborana bilaogera taorian'ny vono olona tao Nag Hammadi
Ejipta 24 Jona 2018
Bilaogera Ejypsiana roa-polo mahery no nosamborina raha teo am-pidinana ny lamasinina tao an-tanànan'i NagHammadi ao an-tampon'i Ejipta. Notarihin'ny Dr Mostafa Al Naggar, niala tao Cairo, Alexandria sy tanàna Ejipsiana hafa ireo bilaogera ireo mba hanome voninahitra ireo fianakaviana niharam-boina tamin'ny vono olona tao Naga Hammadi.
Malezia 22 Jona 2018
Pakistana: Media, Fanehoankevitra Ary Tany Latsaka An-katerena
Azia Atsimo 21 Jona 2018
Torolalana iray mba hahatakarana ny hoe latsaka an-katerena ao Pakistana no navoaka tamim-pitiavana nahazoana alalàna tamin'ny The Emergency Times, izay manolotra fomba fijery iray hafa mahaliana ho antsika.
Fisamboran'i Vietnam mpisolovava sady mpanoratra malaza iray
Azia Atsinanana 21 Jona 2018
Nosamborin'ny polisin'ny minisiteran'ny filaminam-pirenena ao Vietnam noho ny fandraisany anjara tamin'ny asa fanakorontanana i Le Cong Dinh. Io Dinh io dia mpisolovava iray malaza amin'ny fanohanana ny demaokrasia, fiarovana ny zon'olombelona ary amin'ny asa soratra. Vondrona famoaham-baovao sy mpampianatra ambony ao an-toerana maro no nanameloka ny fisamborana an'i Dinh.
Iran: Reformista sady bilaogera mpikatroka voasambotra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Jona 2018
Satria mbola manohy ny fihetsiketsehan'izy ireo manerana an'i Iran ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanohitra ny voka-pifidianana filoham-pirenena tamin'ny 12 Jiona, nisambotra mpikatroka an-jatony ny manampahefana Iraniana, ka anisan'izany ireo bilaogera.
Fanentanana CCTV mamely ny Google.cn
namoaka tatitra iray tao amin'ny pejiny voalohany izay miampanga ny Google.cn amin'ny fampielezana votoaty vetaveta ny Foibe Fitaterana momba izay Vaovao Tsy manara-dalàna amin'ny Aterineto ao Shina (CIIRC).